Umquba owenziwe ngezimpaphe zenkukhu | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Umquba owenziwe ngezimpaphe zenkukhu
Amathani ayizigidi izimpaphe inkukhu nesikhutha, okuyisici sokuphazamiseka kwesimo sezulu, kukhishwa minyaka yonke emhlabeni. Ukuhlanganisa lezi ezimbili kuvumela ukuthola uhlobo olusha lwe Umanyolo sibonga inqubo elula yamakhemikhali, futhi nomkhiqizo wesibili ongasetshenziswa njenge-ejenti yokuvimbela amanzi.
Umhlaba unabantu abalinganiselwa ezigidini ezingama-19.000 izinkukhu, okuyizikhathi eziphindwe kabili nengxenye kunenani labantu. Ngokusetshenziswa kwe- izinyoni Amathani ayizigidi ezinhlanu ezimpaphe avela minyaka yonke. Iningi ligcina ekulandweni lapho lihlala khona amashumi eminyaka.
Ngemuva kokuguqulwa kwe upulasitiki, kumafutha asuselwa ku-hydrogen, ezintweni ezihlanganisiwe, ukusetshenziswa okusha okungenzeka, kwenziwe ngu Shintsha Chen kusuka eChina University of Science and Technology eHefei, esifundazweni i-Anhui, ukuzokwakhiwa Umanyolo.
Ukubola nge ukulele 1 g wezimpaphe ku-600 ° C amahora amathathu ku-carbon dioxide, 3 g we i-bicarbonate de i-ammonium. Lo mkhiqizo ungasetshenziswa njengomquba. Uma ifuthumele ku-60º C, iyadedela i-ammonia, isebenziseka njengomquba.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » I-Ecology » Ezolimo zemvelo » Umquba owenziwe ngezimpaphe zenkukhu
UJohn Gunsha kusho
I-athikili enhle kakhulu lapho ungathola eminye imininingwane ngalesi sihloko
Phendula uJuan Gunsha
Ukuphinda kusetshenziswe kabusha imfucumfucu yamaphepha namakhadibhodi